I-Indo-German Chamber of Commerce Imemezela Amalungu Amakomidi Amasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Zezinhlangano » I-Indo-German Chamber of Commerce Imemezela Amalungu Amakomidi Amasha
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
I-Indo-German Chamber of Commerce
I-Indo-German Chamber of Commerce (IGCC) namuhla imemezele ukuqokwa kukaPuneet Chhatwal, uMqondisi Ophethe kanye no-Chief Executive Officer, i-Indian Hotels Company (IHCL), njengoMongameli omusha weChamber. Umholi webhizinisi onamava emhlabeni wonke, uPuneet Chhatwal uthatha izintambo kuMongameli ophumayo, uKersi Hilloo (uMqondisi Ophethe uFuchs Lubricants India).
I-IGCC iphinde yaqoka iPhini Likamongameli noMgcinimafa omusha ekomidini layo.
IJalimane ingumlingani omkhulu wezohwebo waseNdiya e-EU kanye nomtshalizimali wesikhombisa ngobukhulu ongaphandle eNdiya.
I-IGCC yiJalimane Bi-National Chamber (AHK) enkulu kunazo zonke phesheya, kanye neChamber of Commerce enkulu kunazo zonke eNdiya enezinkampani ezingamalungu angaphezu kwe-4,500 emikhakheni ehlukahlukene.
IGCC futhi umemezele ukuqokwa kwamalungu ayo amasha ekomidi, u-Anupam Chaturvedi (uMqondisi kanye noMmeleli Oyinhloko we-DZ BANK India) njengePhini Likamongameli, noKaushik Shaparia (Isikhulu Esiphezulu se-Deutsche Bank India) njengoMgcinimafa.
Ekhuluma kulo mcimbi, uPuneet Chhatwal, MD kanye noMphathi Omkhulu, i-IHCL uthe: “Kuyinhlonipho ukukhethwa njengoMongameli, futhi sibheke phambili ekuqhubekeni phambili nomsebenzi we-IGCC wokuba yingxenye enkulu yokukhuthaza ubudlelwano bezebhizinisi phakathi India naseJalimane. Esikhathini samanje, kunesidingo esikhulu sokubambisana komhlaba wonke, futhi sizoqhubeka nokuxhasa izinkampani zethu ezingamalungu ekwakheni amathuba amaningi, ukukhuphula ukusebenzisana kanye nokuletha inzuzo. ”
Ekhuluma ngokuqashwa okusha, uStefan Halusa, uMqondisi Jikelele, IGCC, uthe: “Samukela amalungu ekomidi amasha ku-IGCC futhi silangazelele iqhaza labo elikhulu. Sikholelwa ekutheni uMnu. Chhatwal, endimeni yakhe njengoMongameli, uzoletha ulwazi olunzulu ngamasiko nokuqonda okuhlukile kwezamabhizinisi eJalimane naseNdiya. IJalimane ingumlingani omkhulu wezohwebo waseNdiya e-EU kanye nomtshalizimali wesikhombisa ngobukhulu ongaphandle eNdiya. Lokhu kuzosinikeza ithuba lokuhlola izindawo ezintsha zokukhula komnotho ngenkathi sisebenzisa amandla ezizwe zombili. ”
IPuneet Chhatwal inolwazi olucishe lube ngamashumi amane eminyaka yomhlaba. Njengamanje uhola inkampani enkulu kunazo zonke yaseNingizimu Asia yokungenisa izihambi, iHCL. Ngaphambi kwalokhu, uke wabamba iqhaza kwezobuholi eJalimane, naseYurophu. Uphinde abe nguMongameli we-Hotel Association of India kanye noSihlalo weCII National Committee of Tourism.
IGCC yisikhungo esihlonishwa kakhulu eNdiya naseJalimane. Iyinkampani enkulu kunazo zonke yaseJalimane iBi-National Chamber (AHK) phesheya, futhi yiChamber enkulu yezohwebo eNdiya enezinkampani ezingamalungu angaphezu kwe-4500 emikhakheni ehlukahlukene. Zicishe zibe ngu-1,800 500,000 izinkampani zaseJalimane ezisebenza eNdiya, ezihlinzeka ngemisebenzi engaphezu kuka-XNUMX ezweni.
Isungulwe ku-1956, i-Indo-German Chamber of Commerce (IGCC), inhlangano engenzi nzuzo eneminyaka engama-65 yokunika amandla ukubambisana namhlanje ikhona ezindaweni eziyisithupha kulo lonke elaseNdiya kanye nenye eJalimane. Inikeza ngezinsizakalo eziningi njengokuSesha kozakwethu bebhizinisi, ukwakheka kweNkampani, iseluleko sezomthetho, ukuqashwa kwabakwa-HR, ukumaketha nokufaka uphawu lokushicilela, imibukiso yezokuhwebelana, ulwazi kanye nokushintshana ngolwazi ngokushicilelwa, ukuthunyelwa kanye nemicimbi, kanye nokuqeqeshwa.